Tovovavy mpikatroka avy ao Kyrgyzstan sy ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2019 3:48 GMT
Nanomboka niasa tamin'ny sehatry ny fampitam-baovao aho tamin'izaho 13 taona, ary 16 taona aho izao. Nanomboka tamin'ny asa fanaovan-gazetin'olon-tsotra ny traikefako ary nanomboka liana tamin'ny rafitra politikan'ny governemanta aho avy eo ary nanoratra ho an'ny haino aman-jery tao Kyrgyzstan. Nanangona vaovao betsaka momba an'i Kyrgyzstan aho nandritra ny telo taona tamin'ny famokaram-baovao tao amin'ny Orina Mpanasoa Kloop Media.
Nanomboka niasa ho an'ny Zon'olombelona aho avy eo ary nanokatra klioba ho an'ny Vehivavy Mpikatroka Kyrgyzstan izahay tamin'ny volana Novambra 2013. Any amin'ny fireneko, toa ohatra ny ara-dalàna ny manimbazimba ny zon'ny ankizivavy sy ny vehivavy, tena sarotra ny hanafoana io rafitra io, saingy tsy kivy aho raha tsy nino fa ho an'ny demaokrasia ny asa ataonay! Miady ho an'ny fitoviana eo amin'ny ankizilahy sy ny ankizilahy izahay isan'andro.
Noho izany, nanatontosa lahatsary + dikanteny izahay tamin'ny dingana voalohany nataonay. Inona no mampangina ny ankizivavy?
Taorian'izany rehetra izany dia nanomboka niasa niaraka tamin'ny Global Voices izahay ary nanohana anay izy ireo, noho izany nisy ny bilaogy namoahanay ny tantaran'ireo vehivavy avy any Kyrgyzstan rehetra any, mba hampisehoana ny tena zava-misy iainan'ny zazavavy ary mba hahatonga anay hahatsapa ho matanjaka kokoa! Tena faly aho ary velom-pankasitrahana noho ny fahafahana ho isan'ny mpandray anjara tao anatin'ity Vovonana Global Voices 2015 ity ary mba hizara ny traikefa hiasana amin'ity sehatra ity.